Handefa Zaza Tsy Ampy Taona Hiasa sa Hatory An-dalambe ? Safidy Aneren’ny Libanona ireo Fianakaviana Siriana · Global Voices teny Malagasy
Handefa Zaza Tsy Ampy Taona Hiasa sa Hatory An-dalambe ? Safidy Aneren'ny Libanona ireo Fianakaviana Siriana
Voadika ny 03 Febroary 2017 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, русский, Ελληνικά, Español, Italiano, 日本語, English
Ankizy siriana mpitsoaponenana mipetraka aminà trano tsy mbola via ao akaikin'i Reyfoun Libanona, manakaiky ny sisintany iraisany amin'i Siria. Sary an'i ‘Trocaire’ ao amin'ny Flickr. CC 2.0.
Hoy ny Firenena Mikambana, 66 tapitrisa eo no olona voatery nifindra toerana ao anatin'i Siria noho ny ady Siriana, ary nanery 4,8 tapitrisa hafa hialokaloka any amin'ireo firenena manerana izao tontolo izao.
Noho ny fifanakaikezany amin'i Siria, i Libanona no isan'ny iray tena alehan'ireo mandositra ny herisetra. Misy eo amin'ny 1 tapitrisa eo ireo Siriana mpialokaloka voasoratra ofisialy ao amin'ny UNHCR any Libanona, raha ny tarehimarika tsy ofisialy kosa maminavina azy io ho manakaiky ny 1.500.000.
Navoitran'ny The Guardian fa misedra teodrahara sarotra ireo mpialokaloka ireo amin'ny fiainana andavanandrony. Any amin'ny sehatry ny fambolena, asa fanorenna ary ny fanadiovana ihany no avela hitady asa, 70 isanjato mahery amin'ireo Siriana mpialokaloka no voalaza fa miaina ambanin'ny fetra farany ambanin'ny fahantràna.
Lazain'ireo fandinihana fa ny fifangaroan'ny tsy fahombiazan'ny fianakaviambe iraisampirenena tsy mihevitra ny hampifanaraka ny fanomezana fanampiana nampanantenainy amin'ny politikan'ny governemanta Libaney no solika mandrehitra ny fanhantràna sy manery ireo mpitsoaponenana hitady “làlana ambanin'ny tany”.
70 isantajo amin'ireo Siriana mpitsoaponenana no vinaina ho miaina ambanin'ny Fetran'ny Tena Fahantrana Lalina ao Libanona: ambanin'ny USD $3.84 isanolona, isanandro. Vao mainka io ampitomboin'ny zavamisy hoe miha-vesaran-trosa ny tokantranon'ireo mpitsoaponenana, mba hahafahan'izy ireo mahazo ny filàna fototra.
Eny amin'ireo toerana fisavàna, ny vehivay sy ny ankozy no tena betsaka tsy voamarina, satria ireo lehilahy mpitsoaponenana no tena olana fototra ho an-dry zareo manampahefana. Miaraka amin'ny fisian'ireo ankizy sy vehivavy marobe miditra ao amin'ny firenena ary avy eo, ny hery mpamokatra, nohararaotin’ireo mpampiasa sasany izany tsy fifandanjàna izany hanakaramàna ankizy tsy ampy taona ho mpiasa mora karama kokoa sy azo atao amin'izay ilàna azy. Ny fomba fitondra ireo ankizy Siriana mpiasa ao Libanona dia nosokajian'ny ILO ho iray amin'ireo endrika ratsy indrindra amin'ny fampiasàna ankizy.
Araka ny lazain'ny ONG Freedom Fund miady amin'ny asa fanandevozana, manodidina ny 70 amin'ireo ankizy mpitsoaponenana ao Libanona no terena hiasa aminà karama vary masaka mba ho fanampiana ny fianakaviany, tsy misy fomba tena ahafahany miala amin'izay endrika asa izany. Any amin'ireo faritra toa ny Lemak'i Beqaa any atsinanan'i Libanona, voalaza fa zara rha mahazo 1 Dolara Amerikana isanandro ny ankizy iray amin'ny asa fiotazana voankazo aton'izy ireo any amin'ireo toerana fambolena any an-toerana. Araka ny tenin'ny Libaney iray manampahefana monisipaly, “miseho any rehetra any ny asa fanandevozana.”
Tsy nanao afa-tsy ny vao mainka nanaratsy ny teodraharaha manjo ireo mpitsoaponenana ny sasany amin'ny politika Libaney. Ny Janoary 2016, hitan'ny Human Rights Watch fa ireo fepetra momba ny toerana fonenana, nolaniana herintaona lasa izay, dia tsy manome zo ireo Siriana hahazo ny sata maha-mponina ara-dalàna azy ireo. 2 monja amin'ny pisoaponenana 40 nifampitafàna taoanatin'ilay fandalinana no afaka nanavao ny fahafahany mipetraka. Io dia manaraka ny fanapahankevitry ny governemanta tamin'ny May 2015 handidy ny UNHCR hampiato ny fandraketana an-tsoratra ireo mpitsoaponenana miditra ao amin'ny firenena.
Ireny didy momba ny fahafahana mipetraka ireny dia misy fiantraikany manokana amin'ireo ankizy mpitsoaponenana, maro amin'izy ireo no tsy avela mandeha an-tsekoly noho ny tsy fanànany ny sata maha-mponina ara-dalàna mazava tsara. Tamin'ny Jolay 2016, manodidina ny 250.000 ireo ankizy siriana tao Libanona no tsy tafiditra an-tsekoly — mihoatra ny antsasak'ireo ankizy efa ho 500.000 eny anatin'ireo vahoaka siriana mpitsoaponenana ao Libanona efa anatin'ny taona tokony hidirany an-tsekoly.
Nahavita nanao dingana anefa i Libanona amin'ny resaka fanabeazana ny ankizy. Araka ny fanazavàn'ny Human Rights Watch:
Nanao dingana lehibe i Libanona mba hampidirana ireo ankizy siriana mpitsoaponenana ho ao anatin'ny rafitra fanabeazam-bahoaka. Namela azy ireo ny manampahefana mba ho afaka hisoratra anarana any an-tsekoly tsy mila manaporofo ny fahafahany mipetraka ara-dalàna, tsy mandoa sara-pisoratana, ary nosokafana ho azy ireo ny “andiany faharoa” amin'ny kilasy isan-kariva any amin'ireo sekolim-panjakana 238 mba hahazoan'ireo Siriana fanabeazana manara-penitra.
Tamin'ny 2014, nolanian'i Libanona ny politikan'ny Fanatrarana Ny Fanabeazana ireo Ankizy Rehetra (RACE), izay nanampy an'i Libanona hampitmbo ny isan'ireo ankizy siriana voasoratra anarana any amin'ny sekolim-panjakana ho 158.321 tamin'ny fiafaràn'ny taom-pianarana 2015-2016. Tamin'ny 2016, nolanian'i Libanona ny drafitra RACE II maharitra dimy taona, tanjona amin'io ny hanoratra anarana ankizy siriana miisa 440.000 hahazo fanabeazana manara-penitra amndra-pahatongan'ny taompianarana 2020-2021.
Nefa ireo tarehimarika nomen'ny tatitry ny UNHCR, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon,” – Fandanjàna ny Faharefoan'ireo Siriana Mpitsoaponenana ao Libanona – dia manasongadina ny tsy lesoka fototra anatin'ireo politikan'ny governemanta Libaney, izany hoe ireo sakana goavana apetraky ny fepetra momba ny fipetrahna. Iray amin'ny tokantrano dimy ihany ireo mpifindramonina no nilaza fa manana fahafahana mipetraka ara-dalàna ao amin'ny firenena ny olona rehetra ao aminy — fidinana kelynefa manana ny lanjany raha miohatra amin'ny 28 isanjato tamin'ny herintaona.
Tsy nahomby ihany koa ireo mpanololtra fanomezana iraisampirenena, ny nahavitra nanatratrareo tanjona napetraky ny Drafi-pandaminan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Olana Libaney. Hatramin'ny Novambra 2016, 50 isanjato monja tamin'ilay drafit-pandaminana ny olana no nahazo famatsiana.
Na eo aza ireo loza mananontanona ireo, marobe ireo fianakaviana siriana no tsy manana safidy, afa-tsy ny mandositra ny tany niaviany ary tsy maintsy mandefa ny zanany hiasa any ivelany. Raha niresaka tamin'ny Human Rights Watch, Mahmoud, Siriana iray mpitsoaponenana, dia nilaza fa zara raha misy safidy kely mba ananany tsy handefasana ny zanany 12 taona tsy handeha hiasa. “Raha tsy miasa izy, eny an'arabe ny ankohonako no hatory,” hoy izy nanazava.